Global Voices teny Malagasy · 10 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 10 Jolay 2019
Azia Atsinanana10 Jolay 2019
Mediam-bahoaka10 Jolay 2019
Mampahatsiahy antsika ireo fivoaran-draharaha ireo fa tsy mbola vita velively ny asa fiarovana ny zo fototry ny vahoaka. Mitaky fahamalinana maharitra, ary indraindray tolona izany - na dia manaiky sy mahatakatra izay manosika ireo olona tsy itovizantsika hevitra aza isika.
Tena naroroka be ny Global Voices! Ho an'ny mpikambana vaovao anefa dia mety ho sarotra ny mitety ny Global Voices sy mahita ireo fifandraisana manokana izay mandrava ny rindrina virtoaly.
Efa hatramin'ny volana Aogositra 2012 aho no tsy nanoratra ho an'ny GV. Tany an-tsekoly aho nanohy ny fianarako ary vao avy nahazo ny diplaomako. Mbola manohy ny fianarako aho hahazoana diplaoma aho kanefa te hanohy ny fandraisako anjara ato amin'ny GV indrindra tamin'ny fahalasanan'i Gershom Ndhlovu.
Dika10 Jolay 2019